Uhlalutyo lweMilinganiselo ye-HBO: Eyona nto iphambili kuyo emva kweMidlalo yeTrone - Itv
Eyona Itv 'Umdlalo weZihlalo zobukhosi' Ngaba yiHBO's Fiercest Hit. Nantsi indlela eyenziwa ngayo ngaphandle komboniso.
'Umdlalo weZihlalo zobukhosi' Ngaba yiHBO's Fiercest Hit. Nantsi indlela eyenziwa ngayo ngaphandle komboniso.
I-HBO isaphila kwaye iphile kakuhle Imidlalo yeethrone umhlaba.HBO
Umdlalo okhawulezayo wokufanisa: kunye noLeBron James okhokela indlela, iCleveland Cavaliers ivelise ipesenti yokuphumelela rhoqo .663 ukusukela ngo-2005-2010 ngelixa kusenziwa umdlalo wokudlala kuwo onke amaxesha onyaka amahlanu. Emva kokuba uJames eshiye iqela elandela olo gqatso, iiCavaliers zathumela ipesenti engathandekiyo yokuphumelela nje .311 ngaphezulu kwamaxesha amane alandelayo ngaphambi kokubuya kwakhe ngelixa besilela ukwenza ixesha lonyaka-wonyaka ngamnye. Ukuthabatha: Ukuphulukana neHolo yoDumo umdlali we-MVP-caliber unokuyigqiba i-franchise yakho.
Sikukhuthalele ukuxabisa italente enzima kakhulu ngale ndlela. Mhlawumbi oko kuchaza ukuba kutheni isiphelo se Imidlalo yeethrone Kunyaka ophelileyo yazisa njalo isasazeke ngokubanzi ukuthandabuza kumzi-mveliso xa kuxoxwa nge ikamva le-HBO . Umthengi uphando Ngexesha elalixelwe kwangaphambili ngokufuduka kwababhalisi okuyintlekele eya kunyusa intambo yenethiwekhi. Oku emva Imidlalo yeethrone ivelise ngasentla kwe $ 2.2 yezigidigidi kwinzuzo epheleleyo ngaphezulu kwamaxesha asibhozo kunye nokuphakanyiswa kwe-HBO kwiindawo eziphakamileyo zehlabathi. Le ntlekele ayizange yenzeke ekugqibeleni, kodwa kwiinyanga ezili-18 emva koko GoT Imkile i-airwaves, kufanelekile ukukhangela indlela i-HBO ephethe ngayo ngaphandle kokona kubalulekileyo kwimbali yayo.
Ukwenza oko, siza kujonga ukuguquguquka kwabathengi be-HBO, ababukeli kunye nodumo olubalulekileyo. Olunye udidi lokuthathelwa ingqalelo yingeniso kunye nengeniso yokusebenza, kodwa eso sisihloko solunye usuku.
Ngo-2017, i-HBO yayinayo 54 yezigidi Ababhalisi basekhaya-ababandakanya i-HBO, iCinemax, kunye nabathengi bedijithali nge-HBO Ngoku- kunye nezigidi ezingama-88 zabathengi bamanye amazwe (i-142 yezigidi zizonke). Ukusuka apha, kusibekele kancinci.
I-HBO iyeke kakhulu ukusebenzisa i-142 yezigidi kwilizwe liphela kule minyaka idlulileyo kwaye ayisabandakanyi ababhalisi beCinemax kubalo lwabathengi bayo be-HBO. Ngaphandle kwe-US, iinkonzo ze-HBO ziyafumaneka kumazwe angaphezu kwama-50 kwaye zifikelela ngaphezulu 35 yezigidi ababhalisile, kwiwebhusayithi yabo nganye. Ngokwengxelo yomvuzo we-AT & T ka-Okthobha u-Q3, i-HBO kunye ne-HBO Max baqhayisa 38 yezigidi Ababhalisi baseMelika phakathi kwaba babini, le nkampani kuluhlu njengonyuso lwe-10% ngaphezulu kweenyanga ezilithoba zokuqala zika-2020.
Nantsi indlela ejongeka ngayo ngo-Agasti, ngoncedo lwe- Icebo lokuzonwabisa Guy :
Ngokwedatha yokuthengiselana evela kwi-ANTENNA ebonelelwe kuMqwalaseli ngo-Okthobha, i-HBO yaqhayisa ngeyona nqanaba liphuculweyo lokukhula konyaka phakathi kokubhaliselwa kweprimiyamu ye-SVOD nge-27% kwi-Q3 kuthelekiswa ne-11% kwi-Q2, enokuthi iqhutywe ngokuyinxalenye ngokusungulwa kwe-HBO Max. Idatha ye-ANTENNA ikwabonakalise ukuba i-HBO's Q3 churn rate kulo nyaka ingaphezulu kweNetflix, iDisney +, kunye neHulu, kodwa isengcono kune-CBS All Access, Starz, Showtime, Peacock kunye neApple TV +.
Ezahlukeneyo NgoJuni 2019 ibanga ukuba i-HBO Ngoku ikwazile ukugcina i-84% yengeniso evela kubabhalisi bamva nje kumjikelo wokuqala wokuhlawula emva kwesiphelo Imidlalo yeethrone . Ukuphulukana ne-16% yababhalisi kwakukubi kakhulu kunokwehla kwe-7% emva kwexesha leXesha lesi-7, kodwa kukwabuphuculo olukhulu kwi-40% yemfuduko emva kwexesha le-6 lokugqitywa ngo-2016. Emva kwexesha lesi-5, kwabakho ukwehla nge-22%. Kuyavunywa, i-HBO Ngoku (eyayigqithile kubabhalisi abazizigidi ezi-5 kwinani labo lokugqibela elisemthethweni) imele nje isitayile seshishini elipheleleyo le-HBO. Ukusukela ngoko, inkonzo iphindwe yaya kwi-HBO Max. Kodwa ukugcinwa kwethemba elifanelekileyo kukugcina engqondweni.
Umndilili obhalisiweyo phakathi kwabadlali abakhokelayo abahamba phambili uhlala iinyanga ezingama-31, ngokweedatha ekwabelwana ngayo Iindaba zeNBC kunyaka ophelileyo ziiParks Associates. Ukuba ichanekile, iphakamisa ukuba ngelixa i-HBO yelifa yafumana ukwehla okulandelayo Imidlalo yeethrone 'Isiphelo, abo baguqule i-HBO subs engafaniyo nomgaqo wangaphambili kunokwenzeka ukuba bahlale ngaphakathi kwendalo ixesha elide.
Okukwintsusa: i-subs eseleyo iphantsi kwiinyanga ezili-18 ezidlulileyo, kodwa hayi kwinqanaba elibalulekileyo elilindelweyo njenge-HBO ihlala yomelele kwindawo yentengiso.
Ukubukwa kunye neNgxelo ebalulekileyo
Ngexesha layo lokugqibela, Imidlalo yeethrone waphula iirekhodi zokujonga i-HBO ngenqanaba le-5.17 kwindawo ephambili yomthengisi 18-49 yedemokhrasi (+ 8.5% yexesha elingaphezulu kwexesha), 11.992 yezigidi ababukeli abaphilayo (+ 17%) nangaphezulu 43 yezigidi Multiplatform ababambezeli ababukeleyo. Kwakungekho ndlela yakwenza ukuba i-HBO ikwazi ukubuyisela iitotoli zababukeli eziluhlaza enye Uhlahlo-lwabiwo mali olukhulu lwasekhaya lujike . Kodwa ukudityaniswa komgangatho kungadibana ukuze kubengaphezulu kwesibalo samalungu aso. Kwiphambili, ngeedola ezingama-500 ezongezelelweyo ezifakwe kuhlahlo-lwabiwo mali lomxholo wonyaka, i-HBO iqhubekile nokukhupha ezokuqala eziyimpumelelo.
Ixesha lesibini le UBarry yagqitywa ngobo busuku bunye Imidlalo yeethrone kwaye lelona nqanaba liphezulu le-HBO yoqobo (.65) kwidemo ephambili. Umdyarho osisigxina we-sophomore run wabona i-207% yeqa kwi-18-49 yedemo yexesha-ngaphezulu-kwexesha kunye ne-172% spike ekubukeni bukhoma (i-1.6 yezigidi). UBill Hader uphumelele umlingisi oPhambili weNkokeli ebalaseleyo kwi-Comedy Series Emmys ngelixa UBarry Ukwaphawule ukutyunjwa okuBalaseleyo kweKomidi kumaxesha onyaka omabini.
Amanga Amakhulu Amakhulu Ixesha le-2 (ngoJuni 2019-Julayi 2019) luthotho lwesibini oluphezulu lwe-HBO (.43) kwisithuba GoT umhlaba. I-Monterey yesihlanu ihambise intambo yenethiwekhi ye-premium ubusuku obubukelwe kakhulu bababukeli kwisiphelo sayo kwithuba elingaphambi kokuphela kweCawa Ukurhoxisa (ikwenziwe nguDavid E. Kelley). Zendaya's Imincili (NgeyeSilimela 2019-Agasti 2019) luthotho lwenethiwekhi encinci ye-skewing kunye ne-40% yabaphulaphuli bebonke eyakhiwe ngabantu abadala 35 nangaphantsi, inika i-HBO intengiso entsha. Ixesha loku-1 li-avareji engaphezulu kwesigidi se-5.6 sababukeli beeveki ezininzi kwaye benza uZendaya, oneminyaka engama-24, oyena mlingisi mncinci kwiNkokeli yeDrama kwi-Drama Series ephumeleleyo kwimbali ye-Emmys.
Ukuqhubela phambili kwe Ulandelelwano (Nge-Agasti ka-2019-Okthobha i-2019) yayingenguye i-monster ehlaselweyo, kodwa wabanga ii-Emmy ezisixhenxe kulo nyaka kubandakanya ne-Outstanding Drama Series. Umboniso ngoku uthathwa njengowona mdlalo weqonga kumabonwakude. Ngokufanayo, UDamon Lindelof ’s Abalindi (Okthobha 2019-Disemba 2019) ayikhanyisanga ishishini likamabonakude ngomlilo ngamanqanaba aphilayo, kodwa yavelisa phantse izigidi ezisixhenxe zababukeli beplatifomu yeveki yonke. Ngokubalulekileyo, ihambisa i-HBO ngomnye wabaphulaphuli bedijithali ngobukhulu kuthotho olusandula kuqala ukusukela ekuqaleni kwe IWestworld Ngo-2016. Phakathi kokuphononongwa ngokungathandabuzekiyo, ibanga ukuba u-Emmy aphumelele kumzi-mveliso kulo nyaka, kubandakanya ne-Outstanding Limited Series.
Ngo-2020, i-HBO inayo ngokumangalisayo ukhethe ukungavuseleli Umntu wangaphandle (EyoMqungu 2020-EyoKwindla 2020) ngaphandle kwento yokuba yayiloluhlu lwesine lwenethiwekhi (.25) kunye neyesine ekubukweni ngokubanzi kubabukeli ababukhoma ukusukela GoT . Umntu wangaphandle I-avareji engaphezulu kwesigidi se-8 sababukeli beveki ngelixa isiphelo sayo sifumene ababukeli abaphilayo abayi-2.2 yezigidi, bafumana eyona pesenti inkulu (90%) ukusuka ekuqaleni ukuya esiphelweni sayo nayiphi na i-HBO yoqobo kwisizini yayo yokuqala.
UMateyu Rhys ’ Perry Mason Qalisa (ngoJuni 2020-Agasti 2020) ivuselelwe ixesha lesibini. Umboniso uqukunjelwe ngothotho oluphezulu lwe-1.1 yezigidi zababukeli abaphilayo. Uthotho lubone ukukhula okubonakalayo kulo lonke ixesha lonyaka, ukubala ukonyuka kwama-26% kubabukeli be-9PM yokusasazwa kunye ne-45% yokunyuka kokubukela kwidijithali ukusuka kumdlalo wokuqala ukuya kobokugqibela ubusuku. Isiqendu sokuqala sazuza malunga nezigidi ezili-9 zababukeli kuwo onke amaqonga.
Idrama entsha eyoyikisayo Ilizwe laseLovecraft (Agasti 2020-Okthobha 2020) ngumboniso wesithandathu we-HBO obukelwe kakhulu ngeli xesha. Umboniso ugqibe ixesha lawo lokuqala ngothotho oluphezulu lwe-1.5 yezigidi zababukeli, ngokusebenza kwedijithali okuphucula nge-90% ukusuka kubusuku bokuqala. Kuba i-HBO izama ukujonga ngakumbi ukubonwa kwi-HBO Max, kubalulekile ukuba uyiqaphele loo nto Ilizwe laseLovecraft Olona ludwe lwe-HBO lubonwa kakhulu kwiMax ngaphambi Ukurhoxisa . Isiqendu se-premiere asikhangeli ngaphezulu kwesigidi se-10 sababukeli abalibazisayo.
Ukuthetha nge Ukurhoxisa , umboniso luthotho lokuqala lwe-HBO lokuqala ukukhula ngokungagungqiyo kwiveki-emva kweveki kwikhosi yayo yokuqala, kwinethiwekhi nganye. Ihambise uthotho oluphezulu lwe-3 yezigidi zababukeli abaphindaphindayo beqonga ngeCawa ebusuku, eyenza ukuba ibe bobona busuku bubukelwe kakhulu bokubukela i-HBO yoqobo ukusukela Amanga Amakhulu Amakhulu Ukujonga okupheleleyo kunyuke nge-43% ukusuka kwiveki ephelileyo nangaphezulu kokuphindaphinda kabini iinkulumbuso, ngelixa ukusebenza komgama bekunyuke ngama-42% ukusukela kwiveki ephelileyo kwaye kunyuke nge-168% ukusuka kumdlalo wokuqala.
Umongameli wenkqubo uCasey Bloys kunye nayo yonke i-HBO akazange ayilibale indlela yokufumana uthotho lwe-buzzy entsha kuba Imidlalo yeethrone yaphela. Inethiwekhi yentambo yeprimiyamu ibabonile abathengi ukuba bayirhoxisile imirhumo yabo emva GoT 'Iyaphela kwaye, kuthintela ukuqhambuka okungalindelekanga kwangaphambili kwe-spinoff prequel Indlu yeNamba , akunakulindeleka ukuba i-HBO ivelise i-hit kwinqanaba elifanayo lezorhwebo nelibalulekileyo kwakhona. Kodwa i-HBO isenokubhalisela ngaphezulu ababhalisile base-US kuneViacomCBS, iAmazon Prime Video, Starz, Apple TV +, AMC + kunye nePeacock. Ke masingazenzi ngokungathi isiphelo se Imidlalo yeethrone yayiluhlobo oluthile lokufa kwenethiwekhi. I-HBO yenza kakuhle.
I-Movie Math luhlalutyo lwesitulo kwizicwangciso zeHollywood zeshishini kunye nokukhutshwa okutsha.
U-Ilhan Omar uthelekisa i-Framework Immigration ka-Obama 'eyaphukileyo' kuTrump
Iintsana ze-NPR: Indawo yokuSebenza ngaMnye yoSuku ukuSebenzisa ubuso boRadio obunomtsalane
IWarner Bros. Hit nge $ 900M 'Ukudibanisa' ityala
UNeil Young's 70's Classic 'Elunxwemeni' Ubhiyozela isazisi esonakaliswe yilahleko
ngokupheleleyo simahla ukuthandana iisayithi
u-america wakhe waphulukana nemfazwe
Indoda ezantsi shia labeouf imovie epheleleyo
jenny craig inkqubo yokulahleka kobunzima
spider-man ugoduka amazon